Nasa'n yakka hawaa keessatti raawwatame nan qoradhaa jedhe - BBC News Afaan Oromoo
Nasa'n yakka hawaa keessatti raawwatame nan qoradhaa jedhe
Goodayyaa suuraa Anii Maakeen buufata qo'annoo hawaa idila addunyaarraa wayita deebi'u deeggaramaa wayita ture
Dhaabbanni qo'annoo hawaa Nasa'n astiroonootii herrega baaankii abbaa mana ishee duraanii buufata qo'annoo hawaa idila addunyaa keessa taa'uun galte akka qoratu himee tarii yakka hawaa isa jalqabaa ta'uu hin oollee jedhe.
Ani Maakileen akkawuuntii baankii kana buufata qo'annoo hawaa idila addunyaa keessaa fudhachuu himuun garuu hamaan raawwadhe garuu hin qabuu jechuushii New York Times gabaasera.
Hiriyaan ishii duraanii Samar Woorden Komishiinii daldalaa Federaalaa wajjiin ta'uun himannaan bananiiru.
Maakeen ammasitti lafarra turti. Ogeessi seeraa astiroonotii kanaa New York Times itti akka himtetti, maallaqni maatii wajjiin qaban iddoo sirnaan to'atamu jiraachuufi daa'ima Warden waliin horatan wajjiin akka kunuunsanis himaniiru.
Daba hojjatte akka hin qabne ogeettin seera ishii Rastii Haardiin himteetti.
Makeen fi Waarden hojjattoota biiroo tika biyyatti yoo ta'an, Bara 2014 wal fuudhanii waggaa 4 booda wal hiikan.
Qorattoonni Biiroo to'annoo Nasa namoota wal himatan lamaan haasofsiisuu New York Times gabaasera.
Maakeen gidduu galeessaa humna Waraanaa beekamatti kan leenji'aan yoo ta'u, Yoo xiqqaate si'a 800 ol ergama waraanaa Iraaqiin xiyyaarota waraanaa blaliisaaniiru.
Bara 2013 ga'uumsaan qorumsa balaliistummaa darbuun Nasa keessaattis balalistuummaan filatamte.
Ji'oota 6'f buufata qo'annoo hawaa idila addunyaa( ISS) keessa turte. Dubartii samii keessaa deemtee ta'uuf filatamtee turte garuu, daqiqaa xumuraatti uffannii ishiif ta'u dhabamuudhaan imalli ishee haqamuu Nasa'n himeera.
Seerri akkamitti hawaa keessatti hojjata?
Seerrii biyyootni buufata hawaa qaban shan Ameerikaa, Raashiyaa, Jaappaan Kanaadaa fi Awurooppaan waliif mallatteessan qaban isaanirrattis ni hojjata.
Lammiin Kanaadaa yakka buufata qo'annoo hawaa keessatti yoo raawwate seera kanaadaatiin gaafatama. Lammiin Raashiyaas seera biyyaasaatiin gaafatama.
Biyyoonni Awurooppaa seera biyya isaanii fi dambi biyyasaaniitti ilaalamu.
Itoophiyaan saatalaayitii furguggisuuf turte gara Muddetti dabarsite